မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ တရုတ်တွေက မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ တရုတ်တွေက မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ
မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ တရုတ်တွေက မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ
Posted by Good Idea on Sep 26, 2011 in Opinions & Discussion | 48 comments
မနေ့က (၂၀.၉.၂၀၁၁ရက်နေ့) ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့် စိတ်လည်းမကောင်း၊ ခံလည်း ခံပြင်းတာကြောင့် ဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်၊
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ၊ မနေ့က ဗန်းမော်က ထွက်လာတဲ့ ခရီးသည်တင် ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ဟာ ရွှေကူ၊ ကသာ၊ ထီးချိုင့်တွေ ကျော်လာပြီး မောင်းကုန်းဆိုတဲ့ ရွာ ကိုရောက်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ပန်ကာပြုတ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ထဲက ရေစုတ်တင်နေတဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းတစ်ခုကို ၀င်တိုက်မိပါတယ်၊
ရေပိုက်ခေါင်းကြီးဟာ ဘာမှ အပျက်အဆီး မရှိပေမယ် ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ရဲ့ နံရံတွေကတော့ ပိန့်ရှုံ့သွားပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ မောင်းကုန်းရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေအများကြီး ထွက်လာပြီး ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ကို ပြသနာရှာပါတယ်၊ အံ့သြစရာက ပြသနာလာရှာတဲ့ တရုတ်တွေထဲမှာ တရုတ်ရဲ ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊
နောက်ဆုံး ရှပ်ပြေးယာဉ်ပေါ် ခရီးသည်အဖြစ်ပါလာတဲ့ ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေက တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေကို သွားတောင်းပန်မှ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ကိုဆက်လက် ထွက်ခွာခွင့် ပြုပါသတဲ့၊ ဒါနဲ့ ဒီတရုတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းလောက်အထိ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ဘာကြောင့် ရောက်ရှိနေတာလဲလို့ စုံစမ်းတော့ ဒီလိုပါတဲ့၊ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းရွာမှာ တရုတ်တွေက သတ္တုရှာဖွေရေးအမည်ခံပြီး ကုမ္မဏီလာဖွင့်ပါသတဲ့၊
တရုတ်ပေါင်းများစွာလည်းပါလာပြီး စက်ရုံဝင်းကြီး တစ်ဝင်းတည်ဆောက်ပါတယ်တဲ့၊ စက်ရုံဝင်းကြီး ဘယ်လောက်ကျယ်သလဲဆိုတော့ ရွာခံတွေရဲ့လယ်မြေတွေကို အကုန် သိမ်းလိုက်တဲ့အထိ ကျယ်ပါသတဲ့၊ ဒေသခံမြန်မာလယ်သမားတွေကို လျှော်ကြေးတစ်ဧက ၅သောင်းပဲပေးပြီး သိမ်းယူပါသတဲ့၊ လယ်သမားတွေက မကျေနပ်လို့ တရုတ်လူကြီးတွေကို သွားတောင်းပန်တော့ (မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့ တရုတ်တွေကို မြန်မာစစ်စစ်တွေက အသနားခံတာနော်.ရင်နာစရာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ) ခင်ဗျားတိုကလယ်မြေတွေကို ၅သောင်းပေးတာတောင် ကျေးဇူးတင်ပါ၊ အစိုးရက လယ်မြေတွေကိုပိုင်တာ ခင်ဗျားတို့လယ်ကို ခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူး၊ အလကား မသိမ်းတာတောင်ကျေးဇူးတင် လို့ပြန်ပြောတယ်လို့ ရှပ်ပြေးပေါ်ပါလာတဲ့ မောင်းကုန်းရွာက ဒေသခံ လယ်သမားတစ်ဦးကပြောပါတယ်၊
ပိုပြီး ရင်နာစရာကောင်းတာက အဲဒီ တရုတ်စက်ရုံဝင်း အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က မြန်မာမိန်းကလေး ငယ်ငယ်နုနုလှလှရွရွတွေ အများကြီးအလုပ်လုပ်နေကြတယ်တဲ့၊ ဘာအလုပ်မှန်း မသိပေမယ့် တစ်လကို ၅သိန်းကနေ ၁၀သိန်းအထိပေးလို့ မန္တလေး ကာရာအိုကေက ကလေးမလေးတွေတောင် စက်ရုံဝင်းထဲရောက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်တဲ့၊ ရွာခံတွေအနေနဲ့ တရုတ်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေလည်း ခံရတယ်တဲ့၊ဒီတော့ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို အသက်ပေးချစ်တယ်ဆိုတဲ့ လူကြီးမင်းများကို အသနားခံ တောင်းပန်ပါရစေ၊ မြန်မာလူထုရဲ့ဒီဒုက္ခတွေကို ကယ်တင်ပေးကြပါဦးလို့…
ဟာဂျူလီ(ကသာ) ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ တလက်စတည်း အဲဒီပို့စ်အောက်က ကွန်မန့်လေးတခု ကောင်းလို့ တပါတည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကွက်ကို တိဗက်မှာ တရုတ်ကြီးသုံးပြီးပြီ။ ၁၉၅၀ တိဗက်ကိုသိမ်းလိုက်တော့ တိဗက်က အကျယ်ကြီး တိဗက်လူမျိုးကခပ်ကျဲကျဲ တရုတ်အစိုးရယုတ်က တရုတ်လူငယ်မောင်နှံတွေကို အများကြီးစေလွတ်ပြီး အခြေချနေထိုင်စေခဲ့တယ်။ အခုဆို နှစ်၅၀ပြီးမှာ တိဗက်လူမျိုးကနဲနဲ တရုတ်ဟန်လူမျိုးကများများ၊ အဲလိုဗျ။…
တွင်းကြီးကတော့ တဖြည်းဖြည်း နက်သထက် နက်လာတော့တာပါပဲ
သတင်းမှန်ခဲ့ရင် အသင်လောကကြီး ကြည့်နေတော့မှာလားဗျာ….
မင်းအမေကို တရုပ်တွေ ဗျောင်းဗျန်လိုးတဲ့အခါကြမှဖြေ
ကျုပ် က အရင် ဝင်စမ်းပေးချင်လို့ 
ဟုတ်ပါတယ်.. သတင်းမှန်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်းလေးစားပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ လူမျိုးရေးအရ မုန်းတီးစရာ အကြောင်းမရှိပေမဲ့..အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတာကိုတော့ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဘယ်သူမှ လက်မခံနိုင်ပါ။ ကျနော်က လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုကိုတော့ လက်မခံပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကိုရောက်အောင်တော့ အခြေအနေတွေက တွန်းမပို့လိုက်ပါစေနဲ့ဗျာ။ နိုင်ငံကို ဦးဆောင်နေသူတွေ သတိတရားရရှိကြပါစေ။
ကို မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ပဲဗျို့
ဟုတ်တယ် ဘယ်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးဗျာ။
မြန်မာလူမျိုးတွေ.. နိုင်ငံတကာမှာ ၄သန်းအထက်ရောက်နေ..အလုပ်လုပ်နေ. .နေထိုင်အခြေချနေတာကို.. သေသေချာချာဆန်းစစ်တွေးမိရင်.. လူမျိုးရေးခွဲခြားတိုက်ခိုက်.. တွန်းအားပေးတဲ့.. သတင်းတွေအပေါ်.. သမာသမတ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..။
အခုတင်..အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံထဲ. .မြန်မာတွေေ၇ာက်နေတာက.. လူဦးရေသန်းနဲ့ချီနေတာ.. သတိပြုမိကြစေချင်တယ်..။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ.. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေကို major reform အကြီးအကျယ်ပြန်ပြင်သင့်တယ်..။.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေလုပ်နေပုံကြည့်ပြီး.. ကိုယ်လည်းလိုက်လုပ်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ..။ ကျုပ်တဦးတည်သဘောသာဆိုရင်တော့.. ဒေါ်လာ၂သိန်းအထက်ပါလာမဲ့ နိုင်ငံခြားမွေးသူတွေကို.. အကုန်.. အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့် (permanent resident)ပေးပစ်သင့်တယ်..
ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်ပေါက် မြန်မာတွေကိုလည်း.. မက်လုံးကောင်းကောင်းတွေပေးပြီး.. နိုင်ငံတော်သစ်ထောင်ဖို့.. အမြန်ဆုံးခေါ်သွင်းနိုင်တဲ့.. လုပ်ထုံး..ဥပဒေတွေပြဌာန်းသင့်တယ်..။
လူဦးရေနည်းပြီး.. မြေဧရိယာကျယ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ..ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံး ၁နဲ့ ၂ကြားမှာရှိနေတဲ့အတွက်… အဲဒီလိုတွေမလုပ်လို့..မရတော့ဘူး..။
လူဦးရေ စီးဆင်းရွေ့ပြောင်းမှုတွေကို.. တားဆီးလို့အင်မတန်ခက်တဲ့ ..ရာစုနှစ်ထဲရောက်နေတာကိုး..။
အဲ့သည်ကောင်တွေက ဘာလုပ်တာလည်း နားမလည်ဘူးလား
ယနေ့ခေတ်ကြီးရဲ့ အရေးကြီးသတ္တုပစ္စည်းတွေကို လာတူးယူပြီး
ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဗျာ နည်းပညာနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေတွက်
ကိုယ့်ပြည်တွက် နည်းပညာတွေကျန်မယ် အလုပ်အကိုင်တွေရမယ်ဆိုရင်
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရုပ်မှန်သမျှရဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ
ဘယ်ဟာက ပြည်သူတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမှမဟုတ်
မျှတတဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြ
ဘာတွေရထားပြီး ဘာတွေကို လာရိုက်သွင်းနေတာလဲ
အားပေးတယ်ကိုပု၊ အဲဒီလူကြီးကို ဖဲ့တာမှန်သမျှ မျက်နှာလွဲခဲပစ် ထောက်ခံတယ်။ ဟေ့တရုတ်တွေ ငါတို့နိုင်ငံကထွက်သွား။ တရုတ်မလေးတွေတော့ ဆန္ဒရှိရင်နေပါစေ။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း လှေနံနှစ်ဖက်နင်းသလို ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ပြန်ပြင်ပြောမယ်ကွာ.. ဟေ့ ညီမ၊ အမ၊ သမီး၊ တူမ မရှိတဲ့ တရုတ်တွေ ငါတို့နိုင်ငံကထွက်သွား…။
“Fools rush in where angels fear to thread”
Myanmar ‘world’s worst legal system’ for business
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. စပိန်ဇာတိနွယ်က.. လူဦးရေရဲ့၅၀ရာနှုန်းကျော်တဲ့နေရာကျော်ပြိး.. စပိန်စကားပြောကို တရားဝင်ပြည်နယ်ရုံးသုံးစကားပြောအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားတယ်.။
အမေရိကားတနိုင်ငံလုံးမှာ.. လူ၁၂သန်း(၁၂သန်း+) က.. တရားမ၀င်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြတယ်..။
ဥရောပတိုင်းပြည်တွေ…အားလုံး(အားလုံး)လည်း.. အာရပ်နိုင်ငံတွေရဲ့..လူဦးရေလှိမ့်ဝင်လာမှု.. ဘာသာရေးအရ..လွှမ်းမိုးလာမှုကို.. အကြီးအကျယ်ခံစားနေရတယ်..။
တလောက..နော်ဝေနိုင်ငံက..လူတွေသေနတ်နဲ့လိုက်ပစ်သတ်တာဟာ.. ဒီလိုလူမျိုးစိမ့်ဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့.. အမုန်းတရားအခြေခံ..လူသတ်ပွဲပဲ..။
ဒီခေတ်က.. ရှေးကလိုတိုင်းပြည်တပြည်.တပြည်ပြောင်းရင်.. “တုံချန်..တုံချန်..တုံချန်..တုံချန်”နဲ့.. နှစ်ရှည်လများ..အချိန်ယူ..ပြင်ဆင်..ေ ရွ့ပြောင်းကြတဲ့ခေတ်တော့မဟုတ်..
‘ဖွတ်…ရှူး…”ဆို.. အခုထွက်အခုရောက်..အခုနေ… အခုမကြိုက်..အခုပြန်ပြောင်း…ခေတ်..။
တိုင်းပြည်တပြည်ထဲ.. ဒေါ်လာငွေတွေ…သန်းချီလာရင်းနှီးမြုတ်နှံကြဖို့လည်း.. အင်မတန်ခက်တယ်..
အသိအတတ်ပညာရှိတဲ့သူတွေ.. ဘ၀လာမြုတ်နှံဖို့.. ပိုတောင်ခက်သေး..။
တရုတ်ပြည်ချမ်းသာလာတော့.. ယူအက်စ်ရော..ဥရောပေ၇ာ.. ဘိုတွေဆိုတာ..
တရုတ်မလေးတွေဆိုလည်း.. ဘိုတွေကလိုချင်လိုက်သမှ..တွဲချင်သမှ. .အပုံအပင်..။
ကြောင်ကြီးက ရိုးရိုးသားသား ချစ်တာပါ
Dear Web administrator ‘kai’,
Why is it ‘green pluses’ and ‘red negatives’ disappear afteraday or two? is that because ofaglitch in the software, by design or by human intervention? I’m mystified.
တာတိုးတတား တရုတ်တွေ မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းအလှပြင်ဆိုင်တွေမှာထောင်ထောင်ထောင်ထောင်နဲ့
မြန်မာစကားတောင်မတတ်ဘူး မြန်မာမှတ်ပုံတင်မရှိဘူး….မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ကို ခယ ရမလိုဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ တရုတ်တွေက မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ ဆိုတာ တကယ်ကိုမှန်ပါတယ် လူမျိုးရေးအင်မတန်မှ ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တဲ့လူမျိုးပါ မြန်မာလူမျိုးဆို အင်မတန်နှိမ်ပါတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ကပြန်အနှိမ်ခံရတော့ သိပ်မဟန်ဘူးထင်တာပဲ ကိုယ်တိုင်ကလူငယ်တစ်ယောက်ဆိုတော့ တကယ်ကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်မိပါတယ် ပေါက်ကွဲထွက်ချင်စရာ ရင်နဲ့အပြည့်ပါ ခံရခက်ခက်အဖြစ်တွေအများကြီး ရှိနေပါတယ် အစိုးရကဒါတွေကို မသိရိုးအမှန်ပဲလား ဘယ်သူ့ကိုသွားအပြစ်တင်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
သူ့ကျွန်ဘ၀က မလွတ်သေးပါလားနော် :mad:
၀ါ့က ငါးပိနဲ့ တို့ ချရာ ချားတဲ့ ပေါက်ဖော်ပါကွဲ့:D
နောက်ပိုင်း မင်းတို. မိန်းမတွေပါ ရောင်းစားပါတော.
သူတို.နိုင်ငံတောင် ခဏခဏ ရေကြီးနေတာကို
ဒီနိုင်ငံထဲလာပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဆောက်လုပ်ခိုင်းသေးတယ် သေမှာ အကုန်မျိုးတုံးကုန်ဖို.များတယ်
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီး ဒါတောင်မသိဘူးလား စောက်မျိုးတွေရဲ.
သတင်းတော်တော်များများမှာ တ၇ုတ် အကြောင်းကြီးပဲ။ ဒီကောင်တွေက ကိုယ့်မြန်မာပြည်ထဲကိုလာပြီး လူးပါးကလဲဝသေးတယ်။ ဦးနေ၀င်း ခေတ်က တရုတ်တွေကို ဒီအတိုင်းပြစ်သတ်တာ။ အဲ့တုန်းက ခေါင်းတောင်မဖော်နိုင်ဘူး။အခုကြမှ ဒီကောင်တွေ လာစွာနေတာ။
ဗမာမျိူးဟေ့ ဒို့ဗမာ … အဲအဲ ..ဟုတ်ပါဘူး .. တ.ခင်မျိူးဟေ့ ဒို့ဗမာ.. ရွှေ ကွ ရွှေ .. ရွှေဗမာ..
လက်တွေ့မလုပ် ပါးစပ်နှင့်သာ လုပ်ပါသည်။
အလုပ်မဖြစ်လျှင် သူများအား လက်ညိူးထိုးပါသည်။
နောက် … ရွှေကွရွှေဟု ပြန်အော်ကြပါသည်၊။
ယ္ခုတော့ တရုတ်များ နေရာ ယူကုန်ကြပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ အော်ကောင်းဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတရုပ်ဆို ဖင်လေးလျှက်လိုက် ဆားလေးဖြူးလိုက်လုပ်နေတာလေ လူပါးဝနေတာပေါ့ သူတို့အပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဥိံးနောက်မရှိ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ဘဝရှင်မင်းတရားကြိံးနဲ သောက်သုံးမကြတဲ့နောက်မှိံးဆွဲတွေကမှတရားခံအစစ်တွေဗျ။
ကောင်းတဲ့ တော်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ တရုတ်တွေနဲ့ ချစ်ကြည်၇င်းနှီးစွာနေမယ်..။
မကောင်းတဲ့ မတော်တဲ့ မရိုးသားတဲ့ တရုတ်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်မခံရအောင် ကျိုးစားကြတာပေါ့..။
အဲဒီနိုင်ငံခြားသားတရုတ်တွေက အဲဒီအချိုးမျိုး ချိုးတယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းက လူတွေက အဲဒီနိုင်ငံခြားသားတရုတ်တွေကို အရေးလုပ်ပြီးဆက်ဆံမနေနဲ့ပေါ့.။ ကိုယ်ပါတ်ဝန်းကျင် အနီးအနားမှာ အဲလိုလူမျိုးရှိရင် နှိပ်ကွပ်ပြစ်လိုက်ပေါ့.။ ဂျိုမကြွရဲအောင်။ လူမိုက်တွေ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ။ ကိုအောင်ပုတို့လိုလူစားတွေ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ။( အမျိုးချစ်တဲ့လူတွေပြောတာပါ.)
သူများနိုင်ငံလာပြီး လူပါးဝရင်တော. သတ်ပြစ်ဗျာ… ရိုင်းတယ်ထင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုခုတုန်းလုပ် စီးပွားရှာ ပြီးရင် သူများနိုင်ငံသားခံယူသွားအလို. တရုတ်လူမျိုးတွေ.လည်းရှိသေးတယ် အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ.အဒါ လ၀က ကအသုံးမကျလို.ဗျာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတရုတ်တွေ.မျက်နှာသာကိုမပေးနဲ… သူတို.စိတ်ထည်.မှာမြန်မာနိုင်ငံကို တီဗက်ပြည်.လို. လုပ်မယ်လို. စိတ်ကူးရှိရင်လည်းရှိမှာ အေးကျွန်တော်တို.ကလည်း တရုတ်ပြည်ကို ဘယ်လို.၀ါးမျိုးရမလည်း ဆို.တည်းစိတ်ပြန်ထားရမယ်… ခုလောလောစယ်တော. မအေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းနေတယ် ဇော်မင်းလို.တို. ကောင်တွေ.ရှိနေလို. တရုတ်တွေ.မျက်နှာသာရနေတာ.
မထူးပါဘူး ငရဲတွင်းနက်ကြီးထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ..
သူကြီး နဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ပြောခဲ့တာအပြင်
CPMC လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့နေရာတွေမှာဒီထက်ဆိုးတာတွေပါ မြင်နေရပါတယ်
To the gentleman who posted that Chinese are arrogant in Burma and ranted about Tibet, read this, sir!
China trades with Burma. Chinese in Burma are NOT exploiters. The Burmese don’t have to trade if they wish. Many poster(s) here are simple-minded anti-Chinese. Perhaps some are paid by the CIA. Do you know what America and the ‘kale phyu’ did and are doing in Libya, Iraq, Afghanistan and Pakistan? Of course you do!
Do you know why there wasaSep 11? Yes, of course! Here, read this, especially the last two paragraphs. I’m sure you read English.
I Can’t Understand It: Questions Put to Anti-China Advocates
Fan Shouyi, CFAU, China
I can’t understand why inacountry whereagreat president warned his people that “a house divided against itself cannot stand,” there areahandful of people who won’t feel happy until they succeed in bringing other countries down?
I can’t understand why inacountry where black people were delivered from the yoke of slavery, there are some people who give their support to Dalai Lama, the spiritual leader in exile, who isarepresentative of feudalistic serfdom?
I can’t understand why in the country of Martin Luther King, the tradition of resorting to non-violent means for winning their rights is forgotten, butahandful of people makeabig noise and side with Tibetans for independence who are treating even their own kind equally brutally. There isasaying in your language, which goes: “A man is judged by the company he keeps,” so do you feel not ashamed when some of you are in the company of suchaspiritual leader and such ruthless rioters?
I can’t understand why some people who know nothing about the ABC of Tibetan history, say categorically that Tibet is an independent state?
I can’t understand why some people who have not been to Tibet, and seen for them the concord between Tibetans, Hans and other ethnic groups, refuse to recognize the fact that progress and achievements have been made in Tibet, and it is beginning to prosper?
I can’t understand why some people who don’t make any serious investigation of what the central government has done for the well being of the Tibetan people and how much input it has made in terms of human, material and financial resources dismissed all that has been done by the central government as being nothing?
I can’t understand why while people of the Dalai clique have been disrupting the Olympic torch relay along the route, like clowns gone wild—some of them are actually cross-border professional trouble-makers, some people are gloating over it and giving covert assistance?
I can’t understand why members of the parliament ofagroup of nations behave so excitedly at the moment when they voted for boycotting the upcoming Olympic Games? Your anti-China chorus is not even veiled? Is it not an act of folly on your part to hijack your people and your sportspersons? What does it have to do with us if you refuse to come to Beijing to cheer for your athletes and boost their morale?
I can’t understand why some people are bent on putting the blame on China for the tragic consequences of domestic clash of interests between the two parts of the Sudan? And also tie it with the boycott of the Olympic Games to be held in 2008?
I can’t understand why some of your media are playing footage of police arresting rioters in other countries that happened some time before with captions or comments saying without remorse that it is happening in Lhasa?
Why are you using such cooked-up, deceptive news items to hoodwink the world? Abraham Lincoln put it well: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” The behavior of your media shall be recorded asaclassic case study in the history of Western media. Thoughtful students will write their theses on this topic. One anchorperson wrapped up his commentary with an insult against 1.3 billion Chinese people, and has not apologized even now. Suchaperson as he is who shows no respect to others has no right to talk about human rights issues.
I can’t understand why while it is your leaders and tycoons who persuaded China into embracing your idea of globalization, and has founded transnational companies in China and taken awayalion’s share of profits you have generated in China, yet you blame China for climatic changes in the world for the past 200 years?
I can’t understand why your weapons can be sold to whomever you want to, but when China sells some conventional weapons you makeabig fuss and try hard to obstruct?
I can’t understand why some toys are not up to standard because of faulty designs of your manufacturers, yet you makeabig publicity of the quality of China-made products?
I can’t understand why while every country has its own troubles, decision-makers of your country are using your taxpayers’ money to shatter other countries to smithereens to fatten the purses of your weapon manufacturers?
When we were still living in the decadent feudal society, China’s doors were forced open by gunboats of Western powers; cases of concessions of land and compensations followed one another; how much wealth had western powers plundered from China? Who can give us the exact figures? Now what wealth and resources you are “taking away” is obtained by peaceful means of globalization. The Chinese people who had been poor for so long and their leaders have finally realized that the Western way of life which we once repudiated as being bourgeois is basically the same as the goals we are striving to attain.
We are enjoyingahappy life in such way of living is bringing us but at greater costs than warranted. Should we not enjoyahappy life such as you have been enjoying for so long? Should we not keep up with the Jones? We also want to have very tall buildings, very long bridges, very large ships, and we also want to fly to the Moon, to Mars. We live on the same planet, but do you feel so worried about your neighbor whose life is getting better? Haven’t you reaped more profits in the course of our enjoying the bliss of such life and thereby you become happier than ever before?
I really can’t understand why some of you hate China so much and make things so difficult for us? But there is one thing that I firmly believe: China is getting stronger, and our life is getting better. If you are not happy to see China rise, well and good, don’t engage us, don’t lead your trade delegations to Beijing and go back home with orders worth billions of dollars, don’t take away the cash which the Chinese people have earned with sweat and toil. You will not get any benefits by creating chaos in China. We Chinese have the wisdom to adjust our national policies, and we will makeagood job of it all the same.
To the ANTI-CHINESE folk(s) on this forum, if you’re so Xenophobic, how about signing this petition for Rebecca Zahau,aChin from Burma Chin State, who died on July under very suspicious circumstances? Where is YOUR INDIGNATION? Where is YOUR ‘BAMA’ PATRIOTISM?
(Hint: IMHO, this naive Burmese girl wasakept mistress/baby sitter was blamed and killed because the boyfriend’s hyperactive kid fell and was about to die)
There are over TEN THOUSAND posts on Burmese Chin girl’s mysterious death. Where are the ‘patriotic Bamars’ there?
အားကြီး ချီလုံးမထွားနဲ့…။ မြေမ မကောင်းရင် ခြေမ …. လက်မမကောင်းရင်လက်မ ပဲဟေ့…။ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် အဲဒိစိတ်နဲ့ အသက်ရှင်တာ… ကျန်တဲ့ ကောင်ဆိုရင်……ဘယ် သဒေါင်းစားမှ ဗိုမထားဘူး…။ သတ္တိရှိရင်လာခဲ့…။ ဒါဘဲ……….
ကျနော်ကြားဘူးတာကတော့ဒီတရုတ်ဘထွေးတွေဂျပန်တို့၊ ထိုင်ဝမ်းသို့ကိုသွားရင်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေ အရင်တက်စေပြီးမှလွှတ်တာ၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီကောင်တွေက ငါတို့ဗမာတွေလိုဘဲဆိုရှယ်လစ်တစ်ပါတီစနစ်အောက်မှာေ နခဲ့တာကြာတော့လူမှုရေးနားလှည်မှု့ချို့တဲ့နေတယ်၊ ဗမာပြည်ကြီးဆီလွှတ်တဲ့ဒီဘထွေးတရုတ်တွေကိုအဲလိုမျိူး သင်တန်းတွေပေးတက်သလားမသိဘူး။
အဲလောက်များပြီးဒီလောက်လူဘ၀တဲ့ဘထွေးတရုတ်တွေ တံခါးမရှိဒါးမရှိနဲ့ဘယ်လိုဝင်လာသလဲ parachutes များနဲ့လားမသိဘူးနော်။
ကို Tony ပြောတဲ့
ဦးနေ၀င်း ခေတ်က တရုတ်တွေကို ဒီအတိုင်းပြစ်သတ်တာ။ အဲ့တုန်းက ခေါင်းတောင်မဖော်နိုင်ဘူး။
ဆိုတဲ့ဟာဒီအတွက်ကြောင့်ဗမာတွေသွေးနဲ့ဘယ်လောက်ပြန်ဆပ်ရတယ်ဆိုသည်ကိုေ မာင်ရင်သိပ်မသိဘူးနဲ့တူတယ်၊ ကျုံရင်ကျုပ်ပြောပြပေးမယ်၊ ဦးနေ၀င်းရဲ့နာမည်ရင်းက ရှုမောင် တ၊ဲ့တရုတ်လိုရေးရင် 旭芒 ဗမာလိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်နေ၀င်းတဲ့၊ အဲဒီတရုတ်ကြီးကမောင်တို့ရဲ့နောက်ကနေ၂၆နှစ်လုံးလုံး low သွားတာကိုမောင်ရင်ကဂုဏ်ယူနေတယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီဗိုလ်ရှုမောင်ကဗမာကျောင်းသား အများကြီးသတ်သွားတာကောမောင်ရင်ဘယ်လိုသဘောရသလဲ၊ မောင်ရင့်ခေါင်းကထောင်နေသလား၊ ငုတ်နေသလား ?
၂၁ရာစု globlization ခေတ်မှာလူမျိုးရေး ၀ါဒီလုပ်နေရင်တော့ရှေ့ရေးသိပ်လှမယ်မထင်ဘူး။ စင်ကာပူလည်း တရုတ်တွေအုပ်ချုပ်နေတာဘဲ၊ ဗမာလည်းအမျာားကီးသွားတာဘဲ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကဒီလိုဘဲ။
Mr. Don Juan Ronald,
Thanks for the ‘fair & balanced’ comment. Whatabreath of refreshing (and logical) air!
Ethnic Chinese former students of RIT (Gyogon Institute of Technology) organized ‘says puzaw owe’ for ‘kya zu shin sayas and salaams’ together with some mature Burmese students.
RIT-ALUMNI to update
show details 4:15 AM (5 hours ago)
Update (September 26, 2011)
From Saya U Myat Htoo
This isaquick update regarding Saya Allen Htay’s health condition. I
spoke with Ma Ma Mu this morning and she saidaphysical therapy
program for Saya has started last week. There is no dramatic
improvement or significant change in his condition yet. I hope that
with his resilience and all the prayers and well wishes from his
colleagues, friends, relatives and former students, Saya will regain
his strength and mobility inareasonable time frame. I will report
his condition update occasionally.
The intake of 64 and 65 (class of 70 and 71) will hold the 13th
Asariya Pu Zaw Pwe.
Ko Gordon Kaung (M) once mentioned that he would [some day] offer his
winnery in NAPA
asavenue for an RIT gathering and/or mini-SPZP.
Several alums from the class of 65 became faculty members: Saya U Kyaw
Sein, Saya U Nyo Win,
Saya U Kyaw Myint, Saya U Hla Myint (Charlie), Saya U Myo Win, …
ကိုရင် တို့ရေ လူမျိုးရေး ဘာညာ သာရကာ တော့မပါဘူးကွယ်
ရုပ်ဆိုးတို့ ကြုံရ ဘုံဘဝ မှာတော့ တရုပ်လား နှစ်ရုပ်လား သေချာမသိ
သိတာက အနှိမ်ခံရသကွယ့် မတူမတန် အဖက်မတန် ဆက်ဆံခံရသကွယ့်
ဒီနိုင်ငံက အရေသောက် အဖတ်စားပီး အိမ်ရှင် ကို နှစ်ပြားမတန်အောင် လုပ်သလား လုပ်ရဲ့
ဆိုးပါ့ အရမ်းကိုဆိုးတဲ့ ကျုပ်တို့ ဘဝ ။
ဗမာတွေ ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်းပျောက်တော့ …
မသက်သာလို့ .. ကိုလိုနီခေတ် ၊ ဖက်ဆစ်ခေတ် .. သယံဇာတတွေ ရလောက် ယူသွားတာ
ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲ – ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကြောင်းပြုတာက စလို့ .. ရှိတာ ထုတ်ရောင်း
တာနဲ့ တော်တော် ပါကုန်ပြန်တယ် .. ။
ပြန်လည်ထူထောင်နေတာကလဲ ..ခုထိပဲ ဆိုပါတော့.. ။
ခုလဲ – မသက်သာလို့ပဲလား.. ထူထောင်ရေးအတွက်လား .. ။ ထူထောင်ဖို့ ဆိုရင် ဘယ်သူတွေ ထူပြီး ဘယ်သူတွေ ထောင်ဖို့လဲ ..ရှင်းရှင်းလေးပြောပြီး ထုတ်ရောင်းကြပါလား ..။ ရောင်းလဲ ရောင်းရတယ် ၊
ပြီးတော့ အကြွေးကလဲ ထူနေတယ် ။ ရောင်းစရာတွေကလဲ တော်တော်နဲနေပြီ ။
ကိုယ့်အိမ်ကို သား သမီးတွေ နေဖို့ ချန်ထားပြီး ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ပဲ လက်ညိုးထိုးပြီး ရောင်းလိုက်ပါတော့
လား ။ ခုလာပြန်ပီ ..
ပထမတော့ ဧည့်သည် ၊
နောက်တော့ အိမ်ဌား ၊
တဆင့်တက်တော့ အိမ်ပိုင် ၊ ပထမ အိမ်ရှင်ကို နှင်ထုတ်တော့မယ် ..။
သတိလဲ ထားကြပါအုံး ။
သူတို့ကိုအပြစ်ပြောနေမဲ့အစား သူတို့ဒီအလုပ်ကို ဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကို နည်းယူသင့်တယ်။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းသော့ချက်ကို ရှာဖွေသင့်တယ်။ ဒါတွေကို သိလို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် ဒါမျိုးတွေ မရှိနိုင်တော့ ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့ နည်းပညာဗဟုသုတ ၊ ဈေးကွက် ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံေ၇း တွေဟာ အရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကို မကောင်းဘူးထိုင်ပြောနေခြင်းဟာ သူတို့ကို မောင်းမထုတ်နိုင်ပါဘူး။
တခုစဉ်းစားမိတာက နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေထဲမှာ အထက်ပါ နည်းပညာဗဟုသုတ ရှိသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ပြီး ဘဏ်ချေးငွေ တွေလည်းချပေးမယ်ဆို၇င် မြန်မာ ပြည်သားများ အတွက် အကျိုးပိုရှိပြီး ပြန်လာချင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားပညာရှင်တွအတွက်လည်း ရှိလာမယ်ထင်တယ်။ အစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရေနံ သတ္တုအစရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေ အတွက်နည်းပညာ၇ှိတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ပညာရှင်တွေကို ဒီနည်းနဲ့ ဆွဲဆောင်သင့်တယ် ။ ကိုယ်ဆီမှာလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား နည်းပညာရှိသူတွေကို website ပြီး အများသိအောင် ကြော်ငြာပြီး ကမ်းလှမ်းသင့်တယ်။ အောင်မြင်မယ် မအောင်မြင်ဖူးဆိုတာ မသေချာပေမဲ့ ကြိုးစားသင့်တယ်။ ပေါ်လစီတခုချမှတ်ပြီးရင်လည်း စောင့်ကြည့်ပြီး အားနည်ချက်တွေကို ပြင်သင့်တယ်။
အမျိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာဟာလည်း ကိုယ်ကိုစော်ကားလာရင် သူတို့ကိုလက်နဲ့တုန့်ပြန်မဲ့အစား သူတို့ထက်သာအောင်ကျိုးစားပြခြင်းဟာ သူတို့ အထက်ကိုရောက်သွားစေနိုင်ပြီး ပိုမိုထိရောက်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Anyway, whatever side you are in, “History is always written by winner” Learn the Loss of Native American culture by new Spanish, French and English colonials. Don’t forget, we are always walking into the pasts, nobody own any land or culture.
Greetings, Ko Johnnie Michael Aung, I haveaquestion for you although I know the answer.
Are youa‘lan the ye’ from ‘Yangon’ or ‘Mandalay’?
Kissinger urges more efforts on partnership (between America & China)
(China-haters, please note!)
တရုပ်တွေ လူပါးဝတာတော့ တော်တော်မှန်တယ်ဗျ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် အားမတန်လို့မာန်လျော့ပြီး အံကြိတ် ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ် ကိုကြီးအောင်ပုကိုထောက်ခံတယ်ဗျ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု, minthakin (thakin of who?), tony, zaymd, jyaung gyi, pasi, etc.
ARE YOU JEALOUS OF CHINA’S RISE? BURMA (MYANMAR) IS ONE OF THE FIVE POOREST COUNTRIES IN THE UNITED NATIONS. SO HOW ABOUT HELPING BUILD YOUR COUNTRY INSTEAD OF SPEWING RACIST EPITHETS HERE ON MANDALAY GAZETTE? SHAME ON YOU1